I-atelier yezihlahla zama-cherry - I-Airbnb
I-atelier yezihlahla zama-cherry
Cammarata, Sicilia, i-Italy
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Salvatore
Sigxile emvelweni, isitudiyo esizimele, kodwa esiseduze nendlu yethu: emaphandleni, phakathi kwezihlahla zomnqumo nama-cherry, enkabeni yeSicily. Iwindi elingamamitha angu-6 ubude likwenza kukhanye kakhulu. Imvelo, izindonga zamatshe zasendulo, ubuciko nokuklama.
Ilungele ukuhlola izindawo zasemaphandleni zaseSicilian, noma ukusebenza kumaphrojekthi wokudala endaweni enokuthula.
Indawo yokuhlala engu-30 sqm ikuvumela ukuthi uzimele, kodwa ngesikhathi esifanayo ukwabelana nathi indawo engu-2800 sqm, ukuhamba, ukuqoqa futhi udle izithelo zezihlahla noma ukushiswa yilanga ngokunethezeka. Sitholakala enkabeni yeSicily, amakhilomitha angama-50 ukusuka e-Agrigento namakhilomitha angama-90 ukusuka ePalermo, sifinyeleleka ngemoto, isitimela noma ibhasi. Eduze ne-Monte Cammarata oriented reserve: ukuphumula, ukugijima, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukubuka izinyoni, nokudla okuhle kakhulu. I-atelier iyifulethi le-studio, elinikezwe umbhede ophindwe kabili, itafula elikhulu kanye nezinsiza, ezifakwe negumbi lokugezela elineshawa kanye nekhishi elincane elinefriji elincane, i-hob emba izimbawula ezimbili kanye nosinki. Ngesicelo kungenzeka ukwengeza umbhede wengane
Emjikelezweni waseMonti Sicani, eduze nekomkhulu le-Regional Forestry Corps, eqondise indawo yokulondoloza imvelo yaseMonte Cammarata kanye nenkundla yezemidlalo yaseCammarata. Sisendaweni yezindlu ezisemaphandleni, ezihlala zonke, ngokunethezeka kwendawo engayodwa nethule, kodwa empeleni iseduze nedolobha nezinkonzo, ibanga eli-2km nje.
Sihlala esizeni, endlini ezimele ngaphandle kwe-atelier, ngakho-ke sihlala sitholakala kunoma yisiphi isidingo. Ngesicelo kanye nesengezo esincane bangasebenzisa umshini wethu wokuwasha.